Tag: outsource social media | Martech Zone
Ukuzibandakanya kwezokuxhumana nabantu kungaba ngumsebenzi osabisayo enkampanini encane. Ngenkathi ngisebenza ngokubuka komkhiqizo wami uqobo, ngokwethembeka asizinikelanga isu eliqinile nezinsizakusebenza kubukhona bethu bezindaba zomphakathi. Lokho kuyashintsha njenganamuhla, kepha, njengoba siqhubeka nokusebenzisa i-Emphatic ukukhulisa okulandelayo kwe-ejensi yethu. Sizamile ukukhishwa kwemithombo yezokuxhumana ukuze sithuthukise izingxoxo zethu ku-inthanethi, kepha ngokwethembeka akukaze kuhambe kahle. Sasivame ukuthola izibuyekezo ezimbi, ezimbi